गोलोंग पहिलो चिनियाँ एकल माल्ट व्हिस्की ml०० मिलि / 1० एमएल 700०% एबीभ, चीन गोलोंग पहिलो चिनियाँ एकल माल्ट व्हिस्की ml०० मिलि / 750० एमएल %०% एबीवी निर्माणकर्ता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना - गोलोंग लिकर (समूह)
प्याकेजिङ्ग विवरण: प्रत्येक बोतल प्याक उपहार बक्स,bबोतलहरू / गत्ते का डिब्बा
परम्परागत प्रक्रिया पछि, माल्टलाई पिसेर, स्याकरिफाइड, र त्यसपछि 16 घण्टाको लागि 72 डिग्रीको स्थिर तापक्रमको कोठामा किण्वन गरिन्छ, र त्यसपछि परम्परागत केटल प्रकारको डिस्टिलेसन मेसिन मार्फत तीन पटक डिस्टिल गरिन्छ। अवधिको समयमा, बिरुवाहरूको प्राकृतिक सुगन्ध ओक ब्यारेलमा वयस्क द्वारा अवशोषित गर्न सकिन्छ, र एक सुन्दर एम्बर रंग उत्पादन गर्न सकिन्छ। एकै समयमा, यसले उच्च एकाग्रता रक्सीको बलियो उत्तेजनालाई पनि कम गर्न सक्छ। प्रवेशद्वार नरम र मधुर छ, र स्वाद धनी र मधुर छ।
2013,गोलोङ रक्सी समूहशुद्ध लाभ र एकल माल्ट ह्वीस्की निर्यात गर्दै आएको छ। उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रसिद्ध सुपरमार्केट चेन मा बेचिन्छ। हामी निर्यात गर्नका लागि यस उत्पादनहरूको लागि अनुकूलित रक्सी र प्याकेजिङ स्वीकार गर्छौं। ब्रान्ड एजेन्ट निर्यातकको रूपमा, हामी बजार जित्नको लागि सबैभन्दा ठूलो मूल्य छुट दिनेछौं।
लगातार ७ वर्षसम्म निर्यातको नेतृत्व गर्दै आएको छ । छिटो डेलिभरी, ग्यारेन्टी गुणस्तर र उत्कृष्ट बिक्री पछि सेवा। तपाईलाई ल्याउनुहोस्
पाँच-तारे एक-स्टप किनमेल अनुभव। बजारमा परिचालित उत्पादनहरू मध्ये कुनै पनि खाद्य सुरक्षा घटनाहरू अनुभव गरिएको छैन। ग्राहक सर्वेक्षण सन्तुष्टि 90% भन्दा बढी छ। हामी विश्वव्यापी ग्राहकहरू र व्यावसायिक संस्थाहरूबाट पर्यवेक्षण र सुधार स्वीकार गर्छौं।
1.यो व्हिस्की कति पुरानो हो
यो व्हिस्की एक शुद्ध माल्ट व्हिस्की हो, हामी आफैले डिस्टिलरी गर्छौं र यसलाई ओक ब्यारेलमा कम्तिमा5वर्षको लागि पुराना गर्छौं।
हो, हामी अनुकूलन डिजाइनहरू स्वीकार गर्दछौं। तपाईलाई डिजाइन गर्न मद्दत गर्न हामीसँग डिजाइनरहरूको टोली पनि छ।
लेबलिङ मेसिनद्वारा संचालित भएको हुनाले, त्रुटि दायरा धेरै कम छ, र नाङ्गो आँखाले त्रुटि देख्न गाह्रो छ, त्यसैले तपाईं ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ। मदिरा चुहावटको समस्याका सम्बन्धमा लिडा धेरै पटक सुधार भइसकेकोले मदिरा चुहावटको सम्भावना न्यून छ । यदि यो वास्तवमै कारखानाको कारणले हो भने, कृपया प्रमाणको रूपमा फोटो खिच्नुहोस्, र हामी सम्बन्धित जिम्मेवारी वहन गर्न इच्छुक छौं।
7. हाम्रो बजारमा ग्राहकहरू चाइनिज खानाको धेरै घृणित छन्, किनभने चीनमा धेरै खाद्य समस्याहरू छन्, कसरी अन्त बजारको शंका हटाउने?
आवश्यक परेमा हामी सहयोग गर्न सक्छौंतेस्रो-पक्ष निरीक्षणपरीक्षण वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणित BV, SGS आदि बिल्कुल
गुणस्तर ग्यारेन्टी। अन्य प्रमुख स्पिरिट ब्रान्डहरूको तुलनामा, हाम्रा उत्पादनहरू लागत-प्रभावी छन्। मूल्य मध्यम छ र गुणस्तर ग्यारेन्टी छ। मलाई विश्वास छ कि यसले निश्चित रूपमा तपाईलाई ठूलो बजार खोल्न मद्दत गर्नेछ।
8. यदि बल्क वाइन र नमूना रक्सी बीचको भिन्नता छ भने के हुन्छ?
प्रत्येक पटक नमूना पठाइन्छ, हामी सम्बन्धित लेबल टाँस्नेछौं र कम्पनीको नमूना प्रदर्शन र्याकमा प्रतिलिपि राख्नेछौं। बल्क सामानहरू उत्पादन गर्दा, हामी नमूनाहरू अनुसार डिप्लोय र उत्पादन गर्नेछौं, त्यसैले तपाईंले मूल रूपमा विचार गरिरहनुभएको समस्या अवस्थित छैन।
बोतल हस्तनिर्मित क्रिस्टल स्पष्ट गिलासको बोतल
ढक्कन क्रिस्टल हेड कर्क
गोलong्ग एकल माल्ट व्हिस्कीको साथ तपाईंको सप्ताहन्त अझ विशेष बनाउनुहोस्। यो छत बारबेक्यू साथीहरूको साथ गुणस्तर समय, र दिउँसो घाम को लागी उपयुक्त छ। जीवनसाथीसँग साझेदारी गर्नुहोस्, वा तामाको चुनाको टुक्राको साथ बरफ र गार्निशमा राख्नुहोस्। सप्ताहन्तको नयाँ स्वादका लागि गोलong्ग एकल माल्ट व्हिस्कीको आनन्द लिनुहोस्